Yaa ku lug leh khilaafka guddoonka Aqalka Sare? – Kalfadhi
Gudigaan oo sagaal xubnood ka kooban ayaa waxaa ku jira guddoomiyaha Aqalka Sare qudhiisa waxaana ay howshoodu tahy ka shaqeynta isu keenidda Dowoladda Federaalka iyo Maamul Gobleedyada iyo diyaarinta hannaanka lagu geli doono Doorashooyinka Qaranka ee 2020/2021.
Magacaabista gudigaan ayaa imaneysa xili uu khilaaf ka dhex jiro gudfdoonka Aqalka Sare.
Maxay ka dhigantahay magacaabistaan?
Doorashada Soomaaliya maku qabsoomi kartaa xilligeeda?
Ibraahim Faarax Bursaliid ayaa la weydiyay iyadoo uu jiro khilaaf ka dhex jira go’aanka Aqalka Sare sidee ayuu guddigan ku noqaraa inuu ka mira dhaliyo hawlaha loo igmaday?
Suurtagal ma tahay doorasho qof iyo cod ah?
Inkastoo ay xildhibinada golaha shacabka ay ansixiyeen sharciga doorashada ee dalka guddiga suurtagal ma tahay in doorahso qof iyo cod ah ay ka dhacdo Soomaaliya?
Xasan Sheikh Cali oo wax ka dhiga mid ka mid jaamacadaha Muqdisho, kana mid ah dadka darsa siyasadda Soomaaliya ayaa aaminsan in doorasho qof iyo cod ah ay ka horeeyaan in marka hore waxyaaba badan la qabto.
“Hadii xaalka Soomaaliya sii ahaado sida u hadda uu yahay ilaa iyo Bisha Juun 2020, markaas suurta-gal ma ahan in ay Soomaaliya ka dhacdo doorasho qof iyo cod, sababta oo ah gebi-ahaanba waxaan jirin qof talada Soomaaliya gacanta ku haaya oo doorasho qabta, sidaas oo kale ma jiro degaan nabad ah oo aay suurta-gal- tahay in dadka Soomaaliyeed si nabad ah codkooda ugu dhiibtaan,”ayuu yiri Xassan Cali oo xirirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho.
Waxaa kale oo uu sheegay in loo baahan- yahay in la yara qurxiyo qaabkii ama habkii doorasho ee dadbanaa ee la isticmaalay doorashadii kol hore ee 2016/2017.
“Saamileeyda siyaasadda Soomaaliya oo aan heshiis ku ahayn qaabka doorashada (Dowlada Dhexe, Maamul Goboleedyada, Xisbiyada siyaasadda, dadka Soomaaliyeed ee daneeya siyaasada iyo beesha caalamku), way adag tahay, waaa in aay ku midoobaan hal-aragti, hadii la waayo, aragti-midaysan suurta-gal ma ahan in aay Dalkaan doorasho ka dhacdo”, ayuu raaciyay.
Inkastoo guddiga doorashooyinka madaxabanaan ee Soomaaliya uu sheegay in uu u diyaar garoobay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah, dadka qaarna ay su’aal gelinayaan arrintaas iyo xalaalnimada ayaa hadana waxaana la ogeyn sida arrintaas ay isugu waafaqi doonaan dhinacyada siyaasadda oo ku kala boodsan arrima badan oo ay ka mid tahay qaabka Dowladda ay ula dhaqanto maamul goboleedyada iyo siyaasadda haatan ay Dowladda ku maamusho dalka. Xigasho BBC.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka oo ka qeyb-gashay kulan loo hadlayay Sharciga Axsaabta Siyaadda
Madasha Xisbiyadda Qaran oo taageeray Guddi uu magacaabay Guddoomiyaha Aqalla sare